Izinga Lokushisa Lamanzi: ＜ 40ºC
● Inani le-PH: 4 ~ 10
Izinzuzo ze-WQ / EC ezincane eziCwilikayo zendle
1. Umzimba wepompo okhethiwe kanye ne-impeller
Ubuchwepheshe be-CAD busetshenziselwa ukuguqula ukwakhiwa kaninginingi, ukuze umzimba wepompo wamanzi ocwiliswayo kanye nophephela kufaniswe kahle, futhi imicu nemfucumfucu kulula ukuyidlula ngaphandle kokuvaleleka nokuvinjelwa. I-impeller ilinganiselwe ngokuphelele, ukuze ipompo elisebenza ngogesi libe nokudlidliza okuphansi nokusebenza okuzinzile.
I-submersible motor eklanywe ngokukhethekile futhi ekhiqizelwe ngokukhethekile inezinga lokuvikelwa le-IP68 futhi i-stator emazombezombe ingu-F-class insulation. Ngenxa yomphumela omuhle wokupholisa wokusebenza kokucwiliswa kanye nokwehla kokushisa okuphansi okungokoqobo komoya, imoto ihlala isikhathi eside.
4. Ukuthenjelwa kokuthembeka okunokwethenjelwa
Kuvulwa imbobo yokuxuba i-jet emzimbeni wepompo wokucwila we-centrifugal. Lapho ipompo isebenza, amanzi acindezelayo asepomeni enza indiza enejubane elikhulu emgodini wejet ukuze inyakazise ngamandla, ukuze uhla oluningi lokungcola lumiswe, lumunce ipompo bese luyadedelwa. Akukho mvula ezokwakhiwa endaweni enkudlwana, okungcono kunokunyakazisa nje kuphela ethekwini lokuncela ipompo.
Isisetshenziswa sokuvikela ukushisa sifakwe kuma-motor windings. Lapho ithempelesha elijikayo lidlula izinga lokushisa elicacisiwe, into yokuvikela ukushisa izovula ukukhanya kwesikhombisi "okweqile" ngekhabhinethi yokulawula kagesi bese kuvala ngokuzenzakalela. Khumbuza opharetha ukuthi ahlole ukuthola imbangela yokushisa kakhulu kwemoto. Ngemuva kokushisa kwamaconsi ajikelezayo, isici sokuvikela ukushisa sizosetha kabusha ngokuzenzakalela, futhi imoto ingavulwa. Kodwa-ke, akumele ivulwe kuze kube yilapho kuqeda ukushisa okunamandla.
Ipompo elicwilizayo, ipompo lamanzi elicwilizayo, imoto ecwilizayo, intengo yepompo yokucwiliswa, intengo yezimoto ezingaphansi, ipompo elincane elicwilizayo, ipompo lamanzi elicwilizayo, ipompo elisebenza ngogesi, ipompo elicwilizayo, ipompo lamanzi elicwilizayo futha uyathengiswa, ipompo lamanzi angcolile, izinhlobo zempompo yokucwilisa, ipompo elicwilizayo elingu-2, ipompo elicwilizayo eduze kwami, njll.
Olandelayo: Amapompo endle angaphansi kwamanzi （11-22Kw）
ipompo lamanzi elicwilizayo, i-booster pump, ipompo lokucindezela amanzi, imoto ecwilikayo, intengo yepompo yokucwilisa, ipompo lesimanzi elicwilizayo, ipompo lokucwilisa elicwilayo, ipompo elicwilile lokucwilisa, ipompo lokucwilisa elicwilizayo, i-Submersibl